Hel Alternative ee Best Perian u Mavericks
> Resource > Video > Hel Best Perian Alternative for Mavericks
Ka dib marka aad soo dajiyo Mavericks, aad uma ciyaari kartaa noocyo badan oo warbaahinta la QuickTime mar dambe? Oo doonaya in ay soo bixi Perian in la kordhiyo QuickTime si ay u taageeraan codecs dheeraad ah oo ka kooban? No, waxa aanu ka shaqeeya oo dhan. Kooxda Horumarinta ee Perian ka furaysto-in u QuickTime ayaa mar dambe hayaa alaabta. Sidaas, aad leedahay si aad u hesho kale kale ee la heli Perian ugu on Mavericks.
Ugu dambeyntii waxaan helay 2 Perian kale oo aad u. Mid ka mid ah waa in aad isku dayi kartaa video ciyaaryahan non-App ah. Iyada oo loo marayo hab this, waxaad ka ciyaari kartaa AVI, MKV, wmv, iyo iwm, ee Mavericks. Kale waa in la badalo aad videos u QuickTime qaab saaxiibtinimo, tusaale ahaan, MOV iyo MP4. Markaas ayaad ciyaari kartaa wax video on QuickTime. Sidoo kale ah la gediyay videos waxaa loo isticmaali karaa on dhan software Apple, sida iMovie iyo iDVD.
Xalka 1: Isku day a-App oo aan video ciyaaryahan
Xalka 2: Beddelaan videos u QuickTime qaab saaxiibtinimo
By rakibidda si fudud video ciyaaryahan non-App ah, Wondershare Player , aad ku raaxaysan kartaa oo dhan videos on Mavericks. Waxaad waxaa laga saari doonaa walaac ku saabsan sida loo ciyaaro AVI, wmv, files MKV aan Perian. Ciyaaryahanka Wonderhshare waa lacag la'aan iyo Mavericks taageeray. The fududahay in la isticmaalo interface ka dhigi doonaa inaad dareento riyaaqeen aad u isticmaali waqti hore. Iyada oo ay taasi Perian Alternative, wax ka heli doontaa inta badan ka sahlan ku Mavericks.
Sidaas, uma baahnid inaad si loo soo dajiyo a non-app software aad Mac. Kaliya Waxaad u bedeli karaan qaab video aad loo hayaa QuickTime. Si aad uga dhigto dhici, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Video Converter u Mac . Waxay awood u aad si loogu badalo noocyada kala duwan ee warbaahinta (audio, video, DVD-yada) si QuickTime qaab hooyo sida MOV, si aad u isticmaali karto QuickTime inuu u ciyaaro dhow file warbaahinta wax la audio & video tayada asalka on Mavericks.
Just download iyo gashato si ay leeyihiin Perian Alternative ah. Oo anigu waxaan kuu sheegi doona sida loo isticmaalo.
Tallaabada 1. Import files warbaahinta in app this ah
Kadib markii ay tan kale Perian weyn u Mavericks, waxaad soo jiidi kartaa DVD, video iyo maqal ah ee files barnaamijka.
Tallaabada 2. Dooro QuickTime MOV sida qaab wax soo saarka
MOV waa qaab QuickTime ah natively taageerto. Si aad u doortaan sida qaab wax soo saarka, waxaad u baahan tahay inaad ku dhacay qaab icon hoose ee Murayaad this app ee in ay marka hore kala liiska qaabka wax soo saarka, ka dibna tag "Video" category in ay doortaan MOV.
Tallaabada 3. Start video diinta
Just guji "Beddelaan" button ee geeska hoose ee midigta ah ee badiilka ah Perian u Mavericks inuu ku soo bilowdo diinta videos in QuickTime taageerto qaabab.
Ka dib markii ay diinta ka, kaliya keeno badaley video files si QuickTime, iyo waxaad ka heli doontaa ay la ciyaari kara QuickTime si habsami leh. Iyada oo taageero ka this app weyn, waxaad sidoo kale ka ciyaari kara files warbaahinta kala duwan ee aan Perian rakibay. Hadda, kaliya isku day kale ee Perian on Mavericks.
Iska row: Si aad u hesho Perian Best ah Alternative for Mavericks, waxaad qaadan kartaa macluumaadka hoose tixraac.
Kordhiyay QuickTime taageeraan qaabab ka badan, oo lacag la'aan ah Mavericks leheyn
Free, taageero badan wax qaabab video / dvd, Mavericks socon
Beddelaan inay MOV / mp4 in ay taageerayaan ku saabsan dhammaan Apple software: imovie, quicktime iyo idvd, socon Mavericks Software mushaarka badan
Fadlan ka heli tutorial video hoose.
Sida loo Play DVDs on OS X Mavericks
Hel Best Perian Alternative ee Mac (Yosemite ka mid ah)
Sida loo Splice Videos wadajir ah
Sida loo Download ABC Videos ee One Click
Sida loo Dallaga wmv Files
Sida loo Download Online Videos
Sida loo Beddelaan M4V in MKV
Sida loo Download iyo Beddelaan vimeo in MP3
Download VirtualDub MPEG2 & Isticmaal ku cadaadisaa Videos MPEG2